Guqula i-2GB engaphezulu OST Fayile kwiFayile ye-PST kwiFomathi ye-Outlook 2003-Isikhokelo samanyathelo ngenyathelo
Ikhaya iimveliso DataNumen Exchange Recovery Guqula i-2GB engaphezulu OST Fayile kwifayile ye-PST kwi-Outlook 2003 Format
usebenzisa DataNumen Exchange Recovery Ukuguqula ngaphezulu kwe-2GB OST Fayile kwifayile ye-PST kwi-Outlook 2003 Format
Qaphela: Kuya kufuneka ube ne-Outlook 2003 okanye iinguqulelo eziphezulu ezifakwe kwikhompyuter yakho ukuze usebenzise indlela kwesi sikhokelo.
ukuba yakho OST ifayile yenziwe yiMicrosoft Outlook 2002 okanye iinguqulelo ezisezantsi, kwaye ubungakanani bayo bufikelela okanye budlula i-2GB, uya kudibana nayo ubukhulu becala OST ingxaki yefayile kwaye ayinakusebenza OST fayile nayiphi na enye. Kwimeko enjalo, ungasebenzisa DataNumen Exchange Recovery ukuskena ngaphezulu OST fayile, gcina yonke idatha ekulo, kwaye ugcine kwifayile entsha ye-PST kwifomathi ye-unicode ye-Outlook 2003 engenawo umda wobungakanani be-2GB. Emva koko ungasebenzisa i-Outlook 2003 okanye iinguqulelo eziphezulu ukuvula ifayile entsha ye-PST kunye nokufikelela kuyo yonke idatha ngaphandle kweengxaki.
Phawula: Phambi kokuguqula ubukhulu OST ifayile nge DataNumen Exchange RecoveryNceda uvale iMicrosoft Outlook kunye nolunye usetyenziso olunokufikelela okanye luguqule ifayile ye OST ifayile.
Khetha ubukhulu obungaphezulu OST ifayile ekufuneka iguqulwe:
Ungafaka igalelo ngaphezulu OST igama lefayile ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile. Unokucofa kwakhona iqhosha lokufumana ngaphezulu OST ifayile eya kuguqulwa kwikhompyuter yendawo.
DataNumen Exchange Recovery izakugcina idatha eguqulweyo njengefayile entsha kwifomathi ye-PST ye-Outlook ukuze kamva usebenzise iMicrosoft Outlook ukuvula kunye nokufikelela kwidatha eguqulweyo. Kwaye ngokungagqibekanga, igama elitsha lefayile ye-PST ngu-xxxx_recovered.pst, apho i-xxxx ligama lomthombo ogqithileyo OST ifayile. Umzekelo, kwimithombo enkulu OST Umthombo wefayile.ost, igama eliguqukileyo lefayile yePST iya kuba nguSource_recovered.pst. Ukuba ukhetha ukusebenzisa elinye igama, nceda ukhethe okanye usete ngokufanelekileyo:
Ungafaka imveliso yefayile yePST ngokuthe ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kunye nokukhetha igama lefayile ye-PST.
Kuba sifuna ukuguqula ngaphezulu OST ifayile kwifayile ye-PST kwifomathi ye-Outlook 2003, engenawo umda wobungakanani be-2GB, kufuneka sisete ifomathi yefayile yePST kwi "Outlook 2003/2007" kwibhokisi ye combo ecaleni kwebhokisi yokuhlela ifayile. Ukuba useta ifomathi ku- "Outlook 97-2002" okanye "Ukuzimisela ngokuzenzekelayo", emva koko DataNumen Exchange Recovery isenokungaphumeleli ekusebenzeni nasekuguqulweni kobukhulu bakho OST ifayile.
Nceda uqaphele ukuba une-Outlook 2003 okanye iinguqulelo eziphezulu ezifakiweyo, kungenjalo yonke inkqubo yokuguqula iya kusilela.
nqakraza i iqhosha, kwaye DataNumen Exchange Recovery Ndiza start ukuskena kunye nokuguqula idatha kumthombo ogqwesileyo OST ifayile kwindawo ekuyo Outlook 2003 ifayile yePST. Inkqubela phambili yebha
Ngoku unokuvula ifayile ye-PST eguqulweyo ngeMicrosoft Outlook 2003 okanye iinguqulelo eziphezulu, kwaye ubone idatha yoqobo OST Ifayile iguqulelwe kwifayile entsha ye-PST.
Emva koko unokuvula ifayile ye-PST eguqulweyo ngeMicrosoft Outlook 2003 okanye iinguqulelo eziphezulu. Nangona kunjalo, kumyalezo ngamnye oguqulweyo, imixholo yawo iya kutshintshwa ngolwazi olulandelayo lwedemo:
Ukufumana imixholo eguqulweyo, nceda odola ingxelo epheleleyo.
Guqula i-2GB engaphezulu OST Fayile kwifayile ye-PST kwi-Outlook 2003 Format